USA တွင်, young children and babies cannot be left at the house without an adult. အများဆုံးပြည်နယ်များရှိ, kids over 12 years old can take care of their younger brothers or sisters.
If you work and have young children, you will need to pay for your children to go to daycare or haveababysitter. အစိုးရအသေချာသူတို့သည်သင်၏ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းစောင့်ရှောက်မှုယူပြီးနေကြသည်စေရန် daycares စစ်ဆေးနေ.
သင်တစ်ဦးကလေးထိန်းသို့မဟုတ် daycare များအတွက်ပေးဆောင်ဖို့ငွေအလုံအလောက်ရှိမထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်အခြားမိသားစုနှင့်အတူ "ကုန်သွယ်ရေး" နိုင်ပါလိမ့်မယ်. You could watch their children on some days and the other family can watch your children another day. You might be able to findamother or father in your community to watch your children.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, သငျသညျအမြိုးသားတို့ hit မနိုင်. သင်သည်သင်၏သားသမီးများထိမှန်ခဲ့လျှင်, အစိုးရကကွာသည်သင်တို့ထံကသင်၏သားသမီးယူနိုင်ပါသည်. သင်၏သားသမီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအောက်ပါကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သငျသညျအကောင်းဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုသင်ပေးဖို့တခြားနည်းလမ်းတွေလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်.
When parents or others hit or harmachild, it is called child abuse. USA တွင်ကလေးများနာကျင်လူတွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေများရှိပါတယ်. ကလေးကအလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာပါ, ကလေးသူငယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, နှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမိဘများလိုက်နာရမည်.
You might feel sad because your children are becoming very American. ကလေးတွေကိုအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းညှိဖို့အဘို့ထိုသူတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူရန်အဘို့အလွယ်ကူသောကြောင့်ထိုသို့မကြာခဏလွယ်ကူသည်. But remember that you want your children to succeed in America and even if you feel sad, သူတို့ကို America မှာအသက်တာကိုထိန်းညှိဖို့အတှကျအကောငျး.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, many parents and teachers tell children when they doagood job. If you can tell your kids you are pleased with them, ဒီသင်သည်သင်၏ကလေးတွေကိုနှငျ့ဆကျဆံရေးကောငျးရှိကူညီပေးပါမည်. Many refugee and immigrant kids say they wish their parents would praise them if they do something good.
တဦးတည်းအရာသင်နှင့်တကယ်မရေိအကြောင်းကိုနဲ့တူနှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏လေးတွေရှာမည်. အတူတူလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပါ. ဥပမာ, သငျသညျဘေ့စ်ဘောနဲ့တူအားလုံးငှါ. Go to baseball games together with your children.
သင်သည်သင်၏ကလေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်နှင့်သင်၏ဘာသာစကားသင်ယူကူညီပေးနိုင်ပါသည်. သူတို့လညျးသငျ့ဘာသာစကားစကားပြောနှင့်သင်ယူခြင်းစောင့်ရှောက်လျှင်, သင်၏လေးတွေပိုမြန်အင်္ဂလိပ်စာသင်ယူပါလိမ့်မယ်!
သင်၏ဘာသာစကားစာအုပ်တွေဖတ်ရှုဖို့သူတို့ကိုမေးကြည့်ပါ. သင့်ရဲ့ဘာသာစကားမှာရုပ်ရှင် Watch နှင့်ဂီတကိုနားထောင်.
သငျသညျစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့သားသို့မဟုတ်သမီးအရက်ကိုအသုံးပြုနေသည်, သင်သည်သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဆရာစကားပြောနိုင်ပါတယ်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ဆရာ, ဆရာမမိသားစုများကိုကူညီ. ဆရာ, ဆရာမပြောပြရန်အလွန်ပုံမှန်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျရှက်ခံစားရပေမည်. သငျသညျကလူသင့်ကလေးကိုပြဿနာတစ်ခုရှိခြင်းသည်ကိုသိလိုမပြုစေခြင်းငှါ. သို့သော်သင်သည်ထိုပြဿနာကိုဖုံးကွယ်ထားလျှင်, ကပိုဆိုးလိမ့်မယ်.
တစ်ဦး daycare Find